စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူတွေ ဟုတ်ရဲ့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူတွေ ဟုတ်ရဲ့လား
Posted by manawphyulay on Aug 5, 2011 in Creative Writing | 13 comments
လူတိုင်းဟာ စိတ်ချမ်းသာမှု့ရှာနေကြတာ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့များ စိတ်ချမ်းသာမှု့ကို ရမယ် ထင်နေကြသလဲ။
များသောအားဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းက ကိုယ့်ခေါင်းထဲထည့်ပေးတဲ့ အယူအဆဖြစ်တဲ့ ” သူများထက်ပိုပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေနိုင်ရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်၊ ပိုက်ဆံများများရှိရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်၊ ရာထူးတွေအမြင့်ကြီးရှိရင် စိတ်ချမ်းသာမယ် ” လို့ ထင်နေကြတယ်။
ဒီလိုလူတွေဟာ စိတ်အချမ်းသာဆုံးလူတွေ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ တကယ်လက်တွေ့ အကဲခတ်ကြည့်စမ်းပါ။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့လူတွေဟာ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးလူတွေဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။
သူတပါးကိုတန်ဖိုးချလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါ တန်ဖိုးချရာရောက်တယ်။ သူတစ်ပါးကို မလေးမစား ဆက်ဆံပြီဆိုရင်
အဲဒီလိုသိဖို့ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုရှိတဲ့သူ၊ သတိ သမာဓိ ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူမှသာ သိနိုင်ပါတယ်။
သတိ သမာဓိ ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သူတွေကတော့ ဒေါသနဲ့ ဆက်ဆံမယ်၊ မာနနဲ့ ဆက်ဆံမယ်၊ က္ကုသာမစ္ဆရိယနဲ့ ဆက်ဆံမယ်၊ လောဘနဲ့ ဆက်ဆံမယ်၊
အဲဒီလို လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ က္ကုသာမစ္ဆရိယ အားကြီးနေလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိခိုက်နေတာတောင်မှ မသိတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် လောကကြီးကို ကောင်းစေချင်တယ် ဆိုရင် သတိနဲ့နေတဲ့လေ့အကျင့်လုပ်ပါ။ သတိနဲ့နေလာရင် ကိုကိုယ်ကို အများကြီးသိလာလိမ့်မယ်။
ကိုယ်စိတ်ကို အများကြီးသိလာမှသာ သူတစ်ပါးစိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားရတယ်တိုတာ နဲ့နဲ့သိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလူမှသာ ကိုယ့်အကျိုးရော၊ အများအကျိုးရော မထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါအပြင် ကိုယ့်အကျိုးရော၊ အများအကျိုးရော ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်လာအောင် အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ချင်တဲ့လူဆိုရင် သတိ၊ သမာဓိ၊ ဉာဏ်ပညာရှိဖို့ လိုတယ်။
သင်ဟာ ငြိမ်းနေတယ်၊ ပျော်ရွှင်နေတယ်၊ ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေတယ်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အောင်မြင်နေတဲ့သူပါ။
ဘယ်လိုလူကို အောင်မြင်တဲ့လူလို့ ပြောမလဲ။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူလား၊ ရာထူးတွေအကြီးကြီး ရနေတဲ့လူလား။ ဒါတွေ မဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းတဲ့လူ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့လူ၊ ကြည်လင်ရွှင်လန်းတဲ့လူ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူဟာ ဘဝမှာ အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။
စိတ်အေးချမ်းမှု မရှိဘဲနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို ဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲ။ စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမှုရမှ ကိုယ့်ဘဝဟာ အောင်မြင်မှုရတာပါ။
အေးချမ်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ။ ရိုးသားမှုမရှ်ိဘဲနဲ့ အေးချမ်းမှုဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရိုးသားမှ အထိုက်လျှောက် အေးချမ်းတယ်။
တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့ တကယ်အေးချမ်းမှု အစစ်အမှန်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်း နေသွားမှာလား။
အပြစ်တွေ၊ နောင်တတွေ၊ ပူပန်မှုတွေ၊ ကိုယ် မရိုးသားတာတွေ၊ ကိုယ်မရိုးသားမှန်းကို သူများသိနေတာကို မရမကဖုံးပြီးတော့ ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ နေသွားမှာလား။
အောင်မြင်တဲ့သူမှာ ကြီးမားတဲ့၊ လေးနက်တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိတယ်။
လေးနက်တဲ့၊ မြင့်မြတ်တဲံ့၊ မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ် ရှိမှသာ အဲဒီလူကိုဘဝမှာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ ပြောလို့ရတယ်။
တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူဟာ သူမှာ တကယ်လေးနက်တဲ့၊ မြင့်မြတ်တဲံ့အသိဉာဏ် ရှိတယ်၊ စိတ်ထားရှိတယ်။
(ဆရာတော် ဦးဇောတိက) ရဲ့ ကိုးကားချက်လေးတွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
မမ မနောရေးထားတာလေးကကောင်းပါတယ်…. ကျွန်တော်တော့ စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် စိတ်မချမ်းသာနိုင်သေးပါဘူးဗျာ.. ပူပန်မှုတွေနဲ့တော့ အသက်မကြီးချင်ပါဘူး .. မပူပန်ရအောင်တော့ ကြိုးစားနေတုန်းပေါ့ဗျာ..
ဆင်းရဲပေမယ့် ရောင့်ရဲတတ်ရင် ချမ်းသာတာပဲ
ချမ်းသာပေမယ့် လောဘတကြီးဖြစ်နေရင် ဆင်းရဲတာပဲ
အရင်က သူများစိတ်ထဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာပဲ တွေးမိကြည့်မိပါတယ်
chilli lay says:
မနောရေးထားတာလေး အရမ်းကောင်းတယ်။ရိုးသားမှူမရှိရင် အေးချမ်းမှူမဖြစ်နိုင်တာတော့အမှန်ပဲ…
နောက်လူဖြစ်လာမှ ငွေကြေးမပြည့်စုံရင်လဲ စိတ်မချမ်းသာရတာအမှန်ပါဘဲ။
မမနောဖြူလေး ထင်သလို မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာ
အားလုံးကို ဥပက္ခာပြုလိုက်နိုင်လျှင် အတော့်ကို စိတ်ချမ်းသာမဲ့ အဖြစ်ပါပဲ ။
ခုထိတော့ အပူမီးတွေက ပတ်ပတ်လည်မှာဝိုင်းနေပါတယ်
ကျနော် အမြင်တော. လူတစ်ယောက်စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် ပထမဆုံး အတ္တကို လျော.ရမယ်..။ ကျနော်ကိုယ်ပိုင် အသိကိုပြောရရင်တော. .. ငွေမရှိရင်မဖြစ်တဲ.နေရာတွေ ရှိနေပေမယ်. တစ်ခါတလေတော. ငွေနဲ.ပေးဝယ်လို.မရတာတွေ အများကြိးရှိတယ်ဆိုတာ သိလာခဲ.ရတယ်။ ဒါကြောင်. ပိုက်ဆံချမ်းသာချင်လားမေးရင် ချမ်းသာချင်တယ်လိ်ု.ဖြေမယ်…မဖြစ်မလေားဆိုရင်တော….နိုးပါပဲ…ထူးအိမ်သင် သီချင်းထဲကလို …မိုက်မိုက်မဲမဲ ရိုးသားနေဆဲ…ပေါ.
တရားစခန်းမှာ တရားသွားပြတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် စာချဘုန်းကြီးလိုပေါ့ အားကိုးပါရစေ
တရားစခန်းမှာက တရားပြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မရှိသေးတဲ့နေရာမှာ ပြကြည့်တာပါ။ ဘဝမှာ သူများတရားပြမှ သိတာတဲ့ ကိုယ်တိုင်သိနေရင် ပိုပြီး ကောင်းမယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ခံစားမိတာလေးပါ။
“““အချို့ကိစ္စတွေမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့လူတွေဟာ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးလူတွေဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။”””